Dawlada Kenya oo Cudur daar ka bixisay gaf ay u geysatay Midnimada Soomaaliya – GOBOLADA.COM
Dawlada Kenya oo Cudur daar ka bixisay gaf ay u geysatay Midnimada Soomaaliya
June 15, 2022 June 15, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Dawlada Kenya oo Cudur daar ka bixisay gaf ay u geysatay Midnimada Soomaaliya
Kenya ayaa Raali gelin ka bixisay Shirkii shalay uu ka baxay Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya kaddib markii Wakiil ka socday Somaliland uu qeyb ka noqday Shirka
Madaxweynaha Kenya ayaa shirkaas iskugu yeeray Safiirada dalalka caalamka u fadhiya Magaalada Nairobi
Dawlada Kenya waxay ay sheegtay inay qaddarin u hayso madax bannaanida Soomaaliya waxayn ka cudur-daaratay joogitaanka Wakiilka Somaliland iyadoo sheegtay inay si dhow ula shaqeyn doonto safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya.
Raali gelinta Kenya ka hor Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay ka bixitaankii safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya uu shalay ka baxay kulan ay soo qabanqaabisay wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Kenya.
War ka soo baxay safaaradda Somaaliya ee Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay si ula kac u martiqaadday qof ka Socday Somaliland oo qoraal ka soo baxay safaaradda uu ku tilmaamay gobol ka tirsan Soomaaliya.
qoraalkaas ka soo baxay safaarada Soomaaliya ee Nairobi ayaa lagu sheegay in loola dan lahaa in xurmad isku mid ah la siiyo danjiraha Soomaaliya iyo qofka la casuumay taasoo keentay in Danjire Maxamed Nuur Tarzan uu shirka ka baxo.
Dawlada Faederaalka Soomaaliya ayaa ka dalbaday dawlada Kenya Dowladda in ay Faah Faahiso xagudub loo geysatay madaxbannaanida Soomaaliya kaa soo ka yimid Jamhuuriyadda Kenya sida qoraalkaasi xusay.
Taliyihii Booliska Degmada Qardho oo la dilay
Xildhibaan ka Tirsan Golaha shacabka oo ka badbaaday Weerar lagu qaaday
Alshabaab oo weerar Hoobiyaal ah ku qaaday saldhig ay leeyihiin Ciidanka Puntland
Madaxweynaha Kenya iyo Ra’iisal wasaaraha Itoobiya oo ka hadlay xaalada Gobolka Tigray